Ọgwụ ịba ọcha n'anya C ọhụrụ na-enye ọgwụgwọ 90%, nwere ike ibelata ọnụego ọrịa ọrịa na mpaghara nsogbu - Ụwa 2022
Ọgwụ ịba ọcha n'anya C ọhụrụ na-enye ọgwụgwọ 90%, nwere ike ibelata ọnụego ọrịa ọrịa na mpaghara nsogbu
Ọgwụ ọhụrụ antiviral maka nje ịba ọcha n'anya C (HCV) nwere ike belata ọnụ ọgụgụ nke ọrịa imeju na obodo ndị na-adịghị ala ala ihe ruru 50% n'ime afọ 15 na-esote, maka ndị mmadụ n'otu n'otu na-enye ọnụego ọgwụgwọ nke 90%, dịka ọmụmaatụ. na nchọpụta ọhụrụ e bipụtara na Hepatology.
Ihe karịrị nde mmadụ 150 na-ebute nje ịba ọcha n'anya C n'ụwa niile, na mmadụ 350,000 na-anwụkwa site na ọrịa ahụ kwa afọ. HCV bụ isi ihe na-ebute ọrịa imeju, na ihe na-eto ngwa ngwa na-ebute ntụgharị imeju na ọrịa kansa imeju.
Na Europe na mba ndị mepere emepe, HCV na-emetụta ndị na-agba ọgwụ. Enwere ike ịgwọ ọrịa ịba ọcha n'anya C site na iji ọgwụ mgbochi, usoro mgbochi nke ugbu a bụ usoro agịga dị ọcha na usoro sirinji, yana ọgwụgwọ nnọchi opiate.
Atụmatụ ndị a ebelatala ọnụ ahịa nke ọma site na ụkpụrụ dị elu a hụrụ na 1980, mana o yighị ka ọ ga-ebelata ọnụego n'ihu, dịka ndị nyocha siri kwuo.
Ugbu a, ọgwụgwọ antiviral HCV dị nke nwere ike ịgwọ ihe dị ka pasent 60 nke ndị a na-agwọ. Ọgwụgwọ dị ugbu a anaghị anabata nke ọma, ogologo oge (ọnwa ise ruo ọnwa 11), ma nwee obere nnabata n'etiti ndị na-agba ọgwụ, ebumnuche ọgwụgwọ ahụ bụ isi.
Ngwọta HCV ọhụrụ nke antiviral, ụdị nke antiviral na-adịghị arụ ọrụ nke ọma (DAA) na-enweghị interferon, egosila na ọmụmụ ụlọ ọgwụ ka ọ dị irè karị. Ọnwụnwa na-egosi na oge ọgwụgwọ dị mkpụmkpụ (izu iri na abụọ), na-egosi obere nsogbu na mmetụta dị n'akụkụ, ma nwee ọnụego ọgwụgwọ nke pasent 90.
"Mmepe nke ọgwụgwọ HCV ọhụrụ dị mfe dị mfe nwere ike ime ka usoro mgbochi HCV dị ugbu a dịkwuo elu," Prọfesọ Greg Dore, onye isi nke Viral Hepatitis Clinical Research Program, Kirby Institute for Infection and Immunity in Society na Mahadum New South kwuru. Wales, Australia.
Dore gbakwụnyere, "Nweta usoro ọgwụ mgbochi nje HCV dị ọnụ ala maka ndị na-agba ọgwụ kwesịrị ịbụ isi ihe na-elekwasị anya iji nweta ikike mgbochi a," Dore kwukwara.
Ndị nchọpụta kwenyere na ọgwụgwọ ọhụrụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na njikọ dị ugbu a iji gbochie ma gwọọ HCV.
"Ịkwalite ọgwụgwọ HCV dị oke mkpa iji gbochie HCV n'ime ọha mmadụ iji kwado ma kwalite usoro mbelata mmebi ọdịnala - ọgwụgwọ nnọchi anya na mgbanwe agịga," Matthew Hickman, prọfesọ nke ahụike ọha na ọrịa na-efe efe na Mahadum Bristol na onye ndu ode akwụkwọ kwuru. nke ọmụmụ.
Ọgwụ ọhụrụ a nwere ike ịdị ọnụ maka mpaghara ọrịa nwere oke ibu, yana ọnụ ahịa atụmatụ $3.2 nde maka Edinburgh yana ihe dị ka nde $ 50 maka Melbourne na Vancouver. Mana ọgwụgwọ nwere ike ibute ọnụ ala dị ala n'ikpeazụ.
"Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa ọgwụgwọ ndị a yiri ka ọ dị oke ọnụ, ụdị akụ na ụba nke Martin, et al. na UK na ndị nchọpụta Burnet na Australia na-atụ aro na ịkwalite ọgwụgwọ HCV na ndị na-agbanye ọgwụ na-eri oke ọnụ," ka Prọfesọ Margaret kwuru. Hellard sitere na Burnet Institute na Australia.
Hellard kwukwara, "Ọ dịkwa mkpa na mmụba nke ọgwụgwọ HCV na-ejikọta ya na usoro mbelata mmerụ ahụ ọdịnala - ọgwụgwọ nnọchi anya opiate na mgbanwe agịga - nke egosiri na mbụ dị oke ọnụ ahịa," Hellard kwukwara.